Namhlanje lusuku loMhlaza woMhlaba lweHlabathi ka-2020: Inqaku elithi "Ndinguye kwaye ndiya Kuthanda"
Eunyaka wonke, nge-4 kaFebruwari, imibutho kunye nabantu kwihlabathi liphela bayadibana ukukhulisa ulwazi ngomhlaza kunye nokusebenzela ukuwenza ubaluleke kakhulu kwezempilo kwihlabathi. Usuku Cancer World yasekwa yi-Union for Cancer Control International ukuxhasa iinjongo ze-World Cancer Declaration.
Ngokutsho kweAmerican Cancer Society, "kuqikelelwa ukuba zizigidi ezingama-9.5 abantu kwihlabathi liphela ababulawa ngumhlaza ngonyaka ka-2018 - malunga nomyinge wama-26,000 wokubulawa ngumhlaza ngosuku - kwaye eli nani kulindeleke ukuba likhule." Ingaphezulu kwamanani HIV / AIDS, Imalariya kunye nesifo edityanisiweyo.
Umxholo woSuku loMhlaza kwiHlabathi liphela ngo-2020 uthi "Ndinguye kwaye ndiza kwenza." Lo mxholo ikhuthaza wonke umntu ukuba babelane ukuzibophelela yabo ukunciphisa ifuthe umhlaza ngokwabo, nabantu ababathandayo kunye nehlabathi. Ngokwe-World Health Organisation, ubuncinci kwisinye kwisithathu sonke umhlaza emacala ezinokuthintelwa. Isinye isithathu sinokunyangeka ukuba siye safunyaniswa kwangoko kwaye siphathwa kakuhle. Ukutshintsha kobomi obunjengokungatshayi, ukugcina ubunzima besempilweni, ukugcina ukusebenza kunye nokutya kulungile kungathintela iintlobo ezithile zomhlaza.
Ndwendwela www.worldcancerday.org ukufunda ngakumbi ngomhlaza ovela ku Usuku Cancer World ntlangano.
Wenza ntoni ukunciphisa ifuthe lomhlaza? Yabelana nathi kwibhokisi yezimvo engezantsi.
Yapapashwa kwasekuqaleni ngoFebruwari 4, 2019
Konke umhlaza nge American Cancer Society Ndinguye kwaye ndiya kuthanda Thintela uMhlaza Umanyano kulawulo lomhlaza wamanye amazwe WHO Usuku Cancer World Usuku lomhlaza lomhlaba kwi-2019 Isibhengezo somhlaza womhlaba World Health Organization
titi Dokubo Februwari 4, 2020
I-Rave News Digest: UPaul Okoye Ukhathaza i-NCC, uNeymar Ngaphandle kwe-PSG, i-US Ukuphakamisa i-Visa yaseNigeria yaseNigeria + Okungakumbi